Iyo itsva vhezheni yeGit 2.27 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo | Kubva kuLinux
Iyo itsva vhezheni yeGit 2.27.0 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Git Iyo ndeimwe yeanonyanya kufarirwa, akavimbika uye epamusoro-mashandiro vhezheni yekudzora masystem, uye inopa inoshanduka nonlinear yekuvandudza maturusi zvichienderana neshanduro uye merges.
Kuchengetedza kutendeka nhoroondo uye kuramba shanduko mukutarisa kumashure, rinoreva hashing rinoshandiswa yenhoroondo yese yapfuura mukusimbisa kwese uye masiginecha edhijitari evanogadzira mateki ega uye zvivimbiso zvinogona zvakare kuongororwa.
Munguva pfupi yapfuura iyo nyowani vhezheni yeGit 2.27.0 yakagoverwa sosi control system yakaburitswaZvichienzaniswa nekuburitswa kwakapfuura, iyo vhezheni nyowani yakatora 537 shanduko, yakagadzirirwa pamwe nekutora chikamu kwevagadziri makumi manomwe nenomwe, avo gumi nevaviri vakapinda kekutanga mukusimudzira
Git 2.27.0 Kiyi Nyowani Zvimiro
Mune iyi vhezheni itsva yeGit 2.27.0, kuiswa kwekutanga kweiyo yechipiri vhezheni yeGit yekutaurirana protocol yabviswa, iyo inoshandiswa kana uchibatanidza mutengi kure neiyo Git server. Iyo protocol haisati yazivikanwa, asi yakagadzirira kushandiswa nekukanganisa nekuda kwekuzivikanwa kwezvinhu zvinotsvedza zvinoda kutariswa kwakasiyana.
Ndichiri kune rimwe divi, kudzivirira kusavhiringidzika mune iyi vhezheni vhezheni murairo "git tsanangura" nguva dzose shandisa yakawedzerwa nzira yekubuda ("- Yakareba") kana tag yakasimudzwa yakabatana nechisungo yakaonekwa. Sezvakamboitika, tag yakasainwa kana yakatsanangurwa yakaratidzwa ichitsanangura chisungo kunyangwe ikapihwa zita kana kutamisirwa ku "refs / tag /" hutongi.
Kumhanya "git pull" ikozvino kunopa yambiro kana iyo yekumisikidza musiyano dhonza.rebase haina kusetwa zvakajeka uye sarudzo "- [-] kufashukira" kana "-ff-chete" hazvishandi. Kudzvanya yambiro kune avo vasiri kuzodarika, unogona kuseta iyo kusiana kunhema.
Vakadaro akawedzera zviito zvitsva zvitsva ku «git kugadzirisa-Ref -stdin»Izvo bvumira kudzora kwakananga kwekubatanidza kugadzirisa mashandisirwoSemuenzaniso, kuita maviri-nhanho atomic chinongedzo kugadzirisa pane akawanda marekodhi.
Uyewo, yakagadziridzwa git fetch sarudzo dzakajairika kune git fetch. Sarudzo dzakafanana dzisina kutaurwa pamusoro dzakanyorwa uye dzakapfuudzwa mugit fetch yesarudzo dzisipo.
Wakawedzera kugona kuratidza Kubva: uye Musoro: misoro: hapana shanduko kune git fomati chigamba pasina kushandura mavara asiri muASCII encoding.
Izvozvo "-Show-dhonza" yakawedzerwa kune "git log", ichikubvumidza kuti usangoona chete izvo zviitwa zvakaitwa, asiwo chisungo chekubatanidza shanduko idzi kubva kune rakasiyana bazi.
Kugadziriswa kwekudyidzana kwekuisa mukati mezvinhu zvese kwakabatana uye iyo fflush () kufona yakawedzerwa mushure mekuratidzira yekukumbira chikumbiro, asi isati yaverengwa mashandiro.
Mu "git rebase" inobvumidzwa kunyorera zvekare zvese zvemuno zviitwe usina kutanga waita oparesheni «budaKunyangwe dai mamwe acho aimbokwira kumusoro.
Iko kukosha kwekumisikidza kusiana 'pack.useSparse' kwakatsiviwa ne 'chokwadi' kuti ikwanise kugadziridza kwekusarudzika kwakambotangwa sekuyedza.
Wakawedzera seti yesarudzo yekumisikidza SSL kubatana kana yawanikwa kuburikidza neye proxy.
Ruzivo rwunoratidzwa kana uchishandisa iyo "yakachena" uye "smudge" mafirita ekushandura akawedzerwa. Semuenzaniso, chinhu chemuti-ish chave kuratidzwa, mune iro rakashandurwa blob.
Wakawedzera "–autostash" sarudzo ku "git merge".
Yakagadziridzwa Checkout interface.
Wakawedzera iyo -no-gpg-sign sarudzo kune iyo git rebase raira yekuwedzeredza iyo comm.gpgSign marongero.
Wakawedzera musiyano mushandisi matemplate eMarkdown zvinyorwa.
Yakabvisa kurambidzwa kwekuregedzerwa kwenzira dzese pane mashoma ekubhadhara matemplate anotungamira kune isina basa basa muti.
Iyo "git restore -staged -worktree" inoshanda izvozvi nekukasira inoshandisa zvirimo mubazi re "HEAD", panzvimbo yekuratidza kukanganisa.
Basa rakaramba richichinjira kune iyo SHA-2 hashing algorithm panzvimbo yeSHA-1.
Reworked kodhi yekudyidzana neGnuPG.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Iyo itsva vhezheni yeGit 2.27.0 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Linux 5.7: chishamiso chitsva chinoratidzwa